१५औं वार्षिक साधारण सभा
मिति २०७२/०९/०८ गते शुक्रबारका दिन प्रभु बैंक लिमिटेडको १५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सञ्चालक समितीका अध्यक्ष श्री देवी प्रकाश भट्टचनज्यूको अध्यक्षतामा बैंकको प्रधान कार्यालय बबरमहलमा सम्पन्न उक्त वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक समितीको प्रतिवेदन सहित गत आ.व. ०७२/०७३ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरु पारित गरिएको छ ।
वार्षिक साधारण सभाले आवश्यक छलफल तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रस्तावहरु पारित गर्दै विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत बैंकले जारी तथा चुक्ता पँुजी रु. ५,८८,१४,०२,००० बाट बृद्धि गरी रु. ८,२३,३९,६२,८०० पु¥याउन १०ः४ (दश शेयर बराबर चार शेयर) को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय पारित भएको छ । बैंकले अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, एक्विजिसन (प्राप्ति) तथा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
साधारण सभाले ६ जना सञ्चालकहरु निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ जसमा संस्थापक शेयधनीहरुको तर्पmबाट श्री देवी प्रकाश भट्टचन, श्री पुष्प बहादुर प्रधान, श्री अम्बिका शर्मा लामिछाने र श्री रमेश सिंह खड्का र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्पmबाट श्री कुसुम लामा र श्री दक्ष पौडेल (सुभाष) निर्वाचित हुनुभएको छ । साथै आजै बसेको नव निर्वाचित संचालक समितिको बैठकले श्री देवी प्रकाश भट्टचनलाई अध्यक्षमा सर्वसहमतिका साथ चयन गरेको छ ।